Voarara ny fivahinianana brits manomboka ny alatsinainy
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Voarara ny fivahinianana brits manomboka ny alatsinainy
Ny sekretera an-trano britanika Priti Patel dia nilaza fa tsy mandeha amin'ny lalàna izao ny fialantsasatra any ampitan-dranomasina mandra-pahatongan'ny fifehezana ny valanaretina ary izay tratra mitady hanao vakansy dia hosaziana.
Ny fandrarana ny fialantsasatra vahiny dia efa nambara tany Londres iray volana lasa izay saingy mbola tsy mazava ny fanaovana politika momba izany.
Ankoatra ny tsy fahafahany miditra sy tsy mila mody any an-trano dia hampandoavina lamandy ireo mpandeha manandrana mandeha vakansy.
Ireo mpandeha miverina any Angletera dia tsy maintsy manana porofo vao haingana momba ny fitsapana COVID-19 ratsy ary iharan'ny quarantine an-tsitrapo na fanaraha-maso hatramin'ny 10 andro.
Manomboka amin'ny alatsinainy 8 martsa 2021, dia tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fialàn'i Brits ny UK ka handeha hanao fialantsasatra. Ireo mpitsangatsangana dia tokony ho afaka hanaporofo fa tsy handeha hanao vakansy amin'ny alàlan'ny fanolorana amin'ny fisoratana anarana amin'ny endrika efa nalain'ny governemanta. Izay ahiahiana ho mitady hisisika hiala vakansy dia handoa onitra 200 pounds, holavina tsy hiditra ary halefa mody. Ho an'ny dia iraisam-pirenena dia iray ihany no misy, ary izany dia ny fitsidihana any Irlandy.
Azo atao dia mety ho tafiditra ao ny dia asa izay porofoin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana na porofom-pitsaboana, fanambadiana havana akaiky na fahafatesan'ny fianakaviana. Notoroana hevitra ny mpandeha mba tsy hitondra any amin'ny harona golf, jet ski, tehina mpanjono tenisy na porofom-panomezana mitovy amin'izany amin'ny fikasana hanana fotoana mahafinaritra any ivelany.
Nilaza ny sekretera an-trano Patel fa tsy misy daty famaranana nambara, saingy hodinihina matetika io politika io. Ny hany antony ara-dalàna amin'ny dia an-tany hafa dia ny asa, ny fanabeazana, ny antony ara-pitsaboana lehibe ary ny fitsidihana fangoraham-po any amin'ny fampakaram-bady sy fandevenana.
Antitranterina ihany koa fa miverina any aoriana ny mpandeha rehetra ny UK dia tsy maintsy manana porofo vao haingana momba ny fitsapana COVID-19 ratsy ary iharan'ny quarantine an-tsitrapo na fanaraha-maso hatramin'ny 10 andro, raha ny filazan'ny firenena fiaingana. Fitsapana roa hafa no tsy maintsy atao mandritra izany fotoana izany.
Ny fandrarana fialantsasatra avy any ivelany dia efa nambara tany London voalohany iray volana lasa izay saingy tsy mbola mazava ny fitantanana ny politika hatreto. Mbola tsy fantatra mazava hatreto hoe ho feno inona ny politika. Nambaran-dRamatoa Patel fotsiny fa ny mpandeha fiaingan'ny seranam-piaramanidina dia tokony ho vonona haneho ny endrika feno na alaina ary ny "mety" haneho ny antontan-taratasy manohana azy. Ny polisy ao amin'ny seranam-piaramanidina no hanana ny teny farany rehefa miatrika mpandeha misavoritaka, tezitra ary mikorontana.